Ukungabikho kwesondlo okanye ukungavumi ukutya ukutya yingxaki edlalwa kubantwana abancinci kwaye ikhuthaza abazali ukuba babonane nodokotela. Kwiimeko ezininzi, isizathu asiyonyango, kodwa ukuziphatha: umntwana uzama ukubamba iqela ngelixa edla (njengakwezinye iinkalo zobomi bemihla ngemihla) nokuyalela abazali. Izenzo ezinjalo zihlala zibangelwa ngumlondolozo ogqithiseleyo ngabazali okanye ngesimo sengqondo malunga nokutya kwintsapho. Yintoni enokuyenza xa umntwana enqaba ukutya, funda kwinqaku ngesihloko esithi "Umntwana wenqaba ukutya emini."
Izizathu zokula ukutya
Ngokuqhelekileyo, abazali banquma ukuba umntwana ufuna ntoni ukutya, kodwa umntwana uyazi kakuhle iimfuno zakhe kunanoma ubani. Abantwana badinga amandla amaninzi kunabantu abadala (ngokobunzima bomzimba), kodwa badla ngaphantsi. Ukugqitywa akukho nto ithetha uphawu lwempilo. Abaninzi abasondayo abanesidlo esinqabileyo banamandla kwaye banamandla. Abantwana abaxhomekeke kwimpilo yokuhlala bengenanto yokutya, akudingeki ukuba bazalise amandla abo okugcina amanzi njengamaxesha aphindaphindiweyo njengabantwana abaselula. Isisu somntwana asinamandla njengoko isisu somntu omdala, ngoko, sidinga ukutya okungaphantsi. Abanye abantwana balahlekelwa ngumdla wabo ngenxa yokuba baninzi.
Ukutshintshwa kokutya kwenye ixesha ngexesha lemini okanye kwenye indawo kunokunciphisa umntwana wesondlo kunye nesithakazelo ekudleni. Iindali zomntwana zingasabela njani kwisimo sengqondo sabazali ngokutya. Abanye abazali, besaba ukuba umntwana akayidli kakuhle, balungiselela abanye endaweni yokutya izitya. Oku kukhuthaza kuphela umntwana ukuba ashiye ukutya ngokuphindaphindiweyo enethemba lokuba ekugqibeleni afumane isidlo sakhe esithandayo.
Kwiintsapho ezininzi, abantwana banondliwa ngokukhawuleza ukuze ukuzaliseka kwabo kungqina ngokunyamekela kwabazali babo. Kule meko, nayiphi na indlela isetyenziswe: ukukholisa kunye nosongelo, imidlalo, iziphazamiso, ukukhwabanisa, ukunyanzeliswa kunye nokutya okunyanzelekileyo. Kuzo zonke iziganeko, abantwana abavukeli baninzi kwaye banqabile ukula. Ngamanye amaxesha ukulahleka kwesidlo kuhambelana nezikhumbuzo zeziganeko ezingathandekiyo ngexesha lokutya. Ngamanye amaxesha abantwana banyanzelekile ukuba badle xa bengenasidlo - ngenxa yokugula, ngenxa yokuba bengakuthandi ukutya, abafuni nje. Ukukhunjulwa kwezi ziganeko kubangela ukuba umntwana anqabe ukutya. Ukungabi nesidlo kungabangela intlungu, ukuxhalaba, ukuxinezeleka. Kubalulekile ukuthetha nomntwana kwaye ufumane oko kukukhathazayo.
Ukulahlekelwa ngumdla kumntwana ngemini yenye yeempawu eziqhelekileyo zesifo. Izifo ezivame ukuphinda ziqaliswe kubantwana abangaphantsi kweminyaka engama-6 zibangela ukungala. Kodwa oku kungona kubangela obuncinane bokulahlekelwa kwesidlo kwabantwana.
Nceda umntwana wakho adle ngokufanelekileyo
Okokuqala, kuyadingeka ukusebenzisa indlela eyahlukileyo kwinkqubo yokondla umntwana emini. Abantwana nabazali bafanele bathabathe isidlo sasemini kunye nesidlo sakusihlwa njengethuba lokuthetha, bahlangane, bathethe malunga nendlela ehamba ngayo imini. Ngenxa yoko, ukwabelana ngesidlo kwietafile eziqhelekileyo ngamava amnandi. Musa ukuphendula kwiingcamango zomntwana malunga nokutya ngokunyanzeliswa, iingxabano okanye ukumemeza. Ukutya kufuneka kube ngumcimbi ohambelanayo, olula; mdumise umntwana xa edla, njengoko kufanele. Qala iingxoxo, funda ukuxoxisana nomntwana, ngaphandle koko
uya kuzama ukuthatha inyathelo ezandleni zakhe. Abazali kufuneka banakekele isondlo somntwana. Kodwa akubona bonke abantwana badla ngendlela efanayo: umntu ufuna ukutya okungakumbi, okunye kuncinci. Musa ukunyanzelisa umntwana ukuba adle yonke into elele kwisitya sakhe, kodwa qiniseka ukuba uzama zonke izitya ezinikwayo. Kungcono ukubeka ukutya kwiincinci ezincinci, kwaye ukuba umntwana ufuna izinto ezingaphezulu, mbeke uncedo. Musa ukuthelekisa umntwana kunye nabazalwana kunye nodade, kunye nabanye abantwana. Ngoku siyazi ukuba kutheni umntwana enqaba ukutya emini.
Izindlela zokuncedisa impilo yengane
Indlela yokufundisa umntwana ukuba adle ukutya okunempilo?
Ukulungiselela ukutya ukutya kwasebantwaneni ukusuka kwiminyaka emithathu
Ziziphi iimifuno ezilungileyo kubantwana?
Ikhalenda yokukhulelwa: iiveki ezingama-39
Ehluthiweyo "Margarita" kunye nama-strawberries
Ubume bobudlelwane entsapho
Indlela yokunyusa ibanda kunye neendlela zomntu?
I-salmon ye-Pink kunye noshizi
Isaladi yepilisi ethosiweyo kunye ne-parsley kunye negalikhi
Imali yamascots yeFeng Shui